हेर्नुहोला, केहि मिडियाले भोलि पनि बाँसुरी बजाएको फोटो छाप्छन् : प्रधानमन्त्री
हेर्नुहोला, केहि मिडियाले भोलि पनि बाँसुरी बजाएको फोटो छाप्छन् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले विकास र सुशासनको काम गर्दा कतिलाई पिर परिरहेको बताएका छन्। काठमाण्डौ उपत्यका विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण कार्यको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका हुन्।
‘सरकारको ध्यान सुशासन र विकासमा तर्फ छ। सुशासनका कदम अघि बढ्दा कसै–कसैलाई पिर किन पर्ने? विकासका काम गर्दा पिर किन पर्ने?,’ उनले भने, ‘कुनै–कुनै सञ्चार माध्यमले यो न्युज दिनुभन्दा बाँसुरी बजाएको न्युज दिन्छन् भोलि पनि। दया लाग्छ, देश विकास हुन लाग्दा पिर किन परेको ? मलाई त्यो छक्क लाग्छ।’
सञ्चारमाध्यमले सरकारले गरेका राम्रा कामलाई महत्व नदिएको उनले दोहोर्‍याए।
'कुनैकुनै बिर्सिन्छ, अनि यसो भन्यो भनेर कुनै कुनै शब्द काट्छन्। भोलि पनि हेर्नुहोला, बाँसुरी बजाएको फोटो छाप्छन्, यो फोटो नै छाप्दैनन्। यस्तो गरेर के भयो र (हाँतले बाँसुरी बजाएको इसारा गर्दै) बाँसुरी धुन आएन भन्छन्,' उनले भने।
'देश विकास मजाक होइन। आग्रह–विग्रह, पक्ष विपक्षको कुरा होइन। देश विकास साझा अभिभारा हो, कर्तव्य हो। हामीले देश विकास गरिरहेको छौं, खुशी हुनुपर्ने। तुइन विस्थापित भएकोमा रुवावासी छ। दार्चुला पुगेर फोटो खिचेर ल्याउँछन्। त्यहाँ दुईटा तुइन विस्थापित गर्न बाँकी छ। अहिले त्रिशुली यता त बाँकी छैन। कति दुःख गरेका होलान् विचरा!,' उनको भनाइ थियो।
सरकारको ध्यान सुशासन र विकासमा तर्फ भएको दाबी उनको थियो। सुशासनका कदम अघि बढ्दा पिर किन पर्ने? विकासका काम गर्दा पिर किन पर्ने? भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
'अन्डरग्राउन्ड केही गर्नुपरे बाटो खन्ने चलन थियो। अहिले खनेर ड्रिल गरेर पाइप घुसारेर अढाइमिटर मुनिबाट पाइप लगिन्छ। फोहर गर्न परेन। पाइप भित्रैभित्रै जान्छ। कसैलाई यसले दुःख दिँदैन,' उनल भने, 'आज सुरु मात्र दिउँसो गरिएको हो। सुरु भएको जानकारी दिउँ भनेर। पत्रकारको निद्रा नबिगारौं भनेर। अब काम अघि बढाउँदा रातिराति हुन्छ यो काम। बाटोमा कुनै अवरोध हुँदैन।'